Abenzi base China Magnesia Dolomite Brick kunye nabathengisi | Umgcini ophezulu
Amandla oomatshini alungileyo kumaqondo obushushu aphezulu / uzinzo olomeleleyo lokukhwankqiswa kobushushu obushushu
Ukuxhathisa okugqwesileyo ekumiselweni kweekhemikhali / Ukuhamba ngobushushu obuphezulu / Ngaba unokucoca isinyithi
Izitena zaseMagnesia dolomite zilungele iifanishi zokucoca iintsimbi ezingenasici. Umzekelo, isixhobo sokucoca ngaphandle kwesithando somlilo sisetyenziselwa enye imveliso yezitena zemagnesia-chrome. Uluhlu lwayo lwesicelo luya luye lwahluthwa ngakumbi njengemveliso eyenye yezitena zemagnesia-chrome, kwaye uluhlu lwesicelo salo lubanzi kwaye lubanzi. Isetyenziselwa ukwakhiwa kweziko le-AOD, iziko le-VOD kunye nelile.
Igama lebrand / Iipropati
Ukutshintsha kweMigca esisigxina (%) @ 1,500 ℃ x 2hrs
Ukuphinda ubenakho ukuphinda ulayishe (℃) @ 0.2MPa
Egqithileyo Isitena saseMagnesia iHercynite
Okulandelayo: Isibhengezo esandulelayo